Itreyila ekugqibeleni ivela kwiGreen Inferno
Ikhaya Iindaba ezothusayo zoLonwabo Itreyila ekugqibeleni ivela kwiGreen Inferno
by admin Aprili 16, 2014
ibhalwe ngu admin Aprili 16, 2014
Sele lixesha okokoko besinento yokuxela ngokubhekisele kuyo IGreen Inferno, I-ode yothando ka-Eli Roth kwiifilimu ezinje Ukubulawa kwabantu ngenzonzobila. Ukuphela komsila wonyaka ophelileyo sifunde ukuba iiFilimu eziVulekileyo zeNdlela ziya kuthi zihambise umdlalo ngeqonga nge-5 kaSeptemba kulo nyaka, nangona ngelo xesha sasingekayiboni itreyila okanye yonke imifanekiso emininzi ukusuka ekubuyeni kukaRoth ekulindelwe ixesha elide kwisihlalo somlawuli.
Sithembisile ukukugcina ngeposi ngalo lonke ixesha sisiva ngakumbi kwaye namhlanje senza okuhle kweso sithembiso. Itreyila IGreen Inferno Ekugqibeleni yenze indlela yayo yokuphuma kwihlathi elizele ngabantu, kwaye silapha namhlanje ukuze sikunike isitya sesilivere. Kwaye, ngaba iyathandeka.
Cofa iqhosha lokudlala elingezantsi ukuntywila kumazinyo akho xa ujonga okokuqala kwenye yeefilimu ezothusayo zika-2014, eziza kuthi ngoncedo lwe Ifilimu!
[i-youtube id = "b97hV9SeGQk"]
In IGreen Inferno, ebhalwe kunye kwaye ikhokelwa ngu-Eli Roth, iqela labaphembeleli babafundi baya eAmazon ngenzame zokusindisa isizwe ekutshabalaleni. Uhambo luthatha ithuba lokoyikeka xa beqonda ukuba bazama ukukhusela uhlanga lwabantu ... kwaye sele beza kuba yeyona khosi iphambili.
Njengomlandeli omkhulu weefilimu zangaphambili zikaRoth, ndijonge phambili kule, ekufuneka ibe ngumoya womoya omtsha, phakathi kwayo yonke into eyothusayo ebisoloko ikhukula kwi-ofisi yebhokisi kule minyaka idlulileyo. I-Roth's flair for abagulayo, ejijekileyo kunye neyoyikisayo inokuba ngokuchanekileyo kukudutyulwa engalweni uhlobo olufunekayo, kwaye andinakulinda ndonwabise amehlo am kwizoyikiso ezilindileyo.
UEli RothIGreen Infernotrailer
Ukuqhekeka Kwigalari yeHoror Movie Movie I-Egg Art!
Isiqithi seMadness Poveglia siyathengiswa